ICP: Utshintsho kuLawulo lwaMandla kunye neempawu zalo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Zininzi iindlela zokonga kunye neakhawunti yokukhanya esikusebenzisa ekhaya. Enye yazo yi I-ICP eyaziwa ngokuba ngumatshini wokulawula amandla. Sisisixhobo esifakwe ekhaya esisetyenziselwa ukunqumamisa unikezelo xa amandla ombane egqithile kwinto ebekuvunyelwene ngayo. Ihlala isenzeka xa inani elikhulu lezixhobo zombane ziqhagamshelwe ngaxeshanye kwaye amandla ekuvunyelwene ngawo angabaleki ekunikezeleni ngemfuno yombane.
Kule nqaku siza kukuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokutshintsha kwamandla kwe-ICP kunye neempawu zayo.
2 Isebenza njani i-ICP
3 Ngaba i-ICP inyanzelekile?
Olu hlobo lwenkqubo yolawulo lusekwe kumakhaya athi banamandla angaphantsi kwe-15 kW yamandla. Siyazi ukuba ukusikwa konikezelo lwe-halo okomzuzwana kuphela kuba kunokufunyanwa kwakhona xa ubona sidibanisa izixhobo zombane ezigqitha kumandla ekontraki. Sakuba sizicimile izixhobo zombane ebesizisebenzisa ngokugqithisileyo, umbane unokusetyenziswa kwakhona njengesiqhelo.
I-ICP ikwiphaneli yokulawula ngokubanzi apho yonke inkqubo yokukhanya ikhoyo. Umsebenzisi onombane kufuneka azi apho ikhoyo i-ICP ngalo lonke ixesha. Ukuba kugqityiwe amandla ekuvunyelwene ngawo, isixhobo kufuneka senziwe sisebenze kwakhona ukubuyisela umbane wendlu. Ngokwesiqhelo kwiintsapho Bayawazi amandla ekuvunyelwene ngawo kwaye aqhelekanga ukudlulwa. Nangona kunjalo, kukho amaxesha apho ihambelana khona ukuba izixhobo zombane zifunxwe ekusebenziseni amandla ombane ngaxeshanye kwaye yenza ukuba i-othomathikhi icime.
Inkampani yokuhambisa kwindawo nganye itshintsha iimitha ze-analog zezo zedijithali, oko kuthetha ukuba i-ICP idityaniswe nezixhobo zombane ngokwawo.
Isebenza njani i-ICP
Abantu abaninzi bayazibuza ukuba benze ntoni xa i-ICP iqhubeka nokutsiba. Eyona nto ikhuselekileyo kukuba itsiba ngokuqhubekekayo xa uvula isibane kwaye awunakhontrakthi amandla awaneleyo okubonelela ngezixhobo ozisebenzisa rhoqo. Kule meko, eyona nto icetyiswayo kukunyusa amandla asetyenzisiweyo ukunqanda ukusikeka okuqhubekayo kunikezelo.
Umhambisi wombane uvumela utshintsho kumandla wesivumelwano ngonyaka. Kungenxa yesi sizathu le nto kufuneka sibale kakuhle ukuba leliphi elona gunya lilungele thina ukuze songe kangangoko kunokwenzeka kwityala lombane kunye nokuchitha amandla kunye nemali. Umthengi Ngamaxesha onke kufuneka uyazi ukuba uhlala ubhalisela amandla aqhelekileyo kunye nomthengisi. Ukuba ufuna ngaphezulu okanye ngaphantsi, kuya kufuneka utshintshe isicwangciso sokuqesha.
Ukuba umsebenzisi ufuna ukwandisa umbane onesivumelwano, unokunxibelelana naye nawuphi na umrhwebi kwintengiso emnika ixabiso eliphantsi kwaye elihambelana neemeko zakhe. Sicinga ukuba sifuna ukunyusa amandla ombane kodwa zimbalwa kuphela izinto eziye zatsiba i-ICP ngexesha elifanelekileyo. Kuyenzeka ukuba kufuneke siphinde silungelelanise indlela esizisebenzisa ngayo izixhobo zethu phambi kokuba sitshintshe siqeshe amandla aphezulu. Kwaye asizukugcina imali kwityala lombane kuphela, kodwa siza kukhupha ikharbon diokside encinci emoyeni kwaye sinciphise ukusetyenziswa kwamandla.
Ukunyusa amandla ombane wekhaya kunendleko. Kufuneka iqondwe into yokuba umthengi kufuneka ahlawule umhambisi kwindawo yakhe ngexabiso lombane, elihambelana nala malungelo alandelayo:
Ilungelo lokwandiswa 17,37€/kW + IVAT
Ilungelo lokufikelela 19,70€/kW + IVAT
Ilungelo lokudibanisa € 9,04 + VAT
Ngaba i-ICP inyanzelekile?
Kukho amanye amakhaya angenayo i-ICP kuwo ukusukela kwithuba elidlulileyo bekunganyanzelekanga. Kukho amathuba amaninzi oku kwenzeka. Enye yazo kukuba i-ICP ayikho kuba ibinganyanzelekanga kwaye likhaya elidala okanye ngenxa yokuba ungafuni ukunqunyulwa unikezelo nangaliphi na ixesha. Ngayiphi na imeko, kubalulekile ukuba nesixhobo ngezi zizathu zilandelayo:
Ukhusela ikhaya ngokuthintela ukufakelwa kombane ekutshiseni kakhulu ngenxa yokusetyenziswa kwezinto zombane ezininzi ngexesha elinye.
Igcina ufakelo kwimeko yokusilela kombane. Ayisikhuseli nje kuphela ngengozi okanye umlilo onokubakho, kodwa ikwasinceda ekugcineni ukufakelwa konke kwimeko yengxaki okanye isekethe emfutshane.
Inkampani yokuhambisa inokuhlawula nangayiphi na imeko ukuba awunayo i-ICP ekhaya. Ngale nto, iyakunyanzela ukuba ihlawule intlawulo eyongezelelweyo ebonakaliswa kwityala lombane phantsi komgaqo wesohlwayo sokungabikho kwe-ICP. Ungangabinaso esi sixhobo endlwini yakho okanye kuba likhaya elidala kwaye ngelo xesha bekunyanzelekile ukufakela isixhobo okanye awufuni ukuba isibane sigcinwe kwaye nonikezelo lucinyiwe.
Xa ikhaya lingenaso iswitshi solawulo lwamandla, ungathumela umhambisi wakho ukuba ayifake okanye uyenze ngokwakho. Ukuba imitha yeyokurenta kunjalo umhambisi ophethe ukuyifaka. Ukuba imitha ikwipropathi yakho, kufuneka uyifake ngokwakho.
Kuxhomekeka ekubeni sithathe isigqibo sokuyifaka ngokwethu okanye umthumeli ogunyazisiweyo, iya kuba nexabiso elahlukileyo. Ukuba sifuna ukuyifaka, kufuneka siqeshe isifakeli sevolthi esezantsi okanye inkampani yokufaka. Iindleko ziya kuxhomekeka kuhlobo lomenzi we-ICP. Nje ukuba umhambisi afakwe, uphethe ukungqinisisa nokulawula isixhobo.
Olunye ukhetho olunokuba luncedo kukuqasha isixhobo. Yenziwa ngomhambisi kwaye inoxanduva lokufaka kunye nokuqinisekisa. Iindleko zimalunga ne-0.03 ngepali nganye.
Ixesha elithathwayo ukupasa ukuhlolwa kwesakhiwo lixhomekeke kuhlobo lwesakhiwo. Eyona nto iqhelekileyo kukuba yenziwa rhoqo kwiminyaka eli-10 ukuqinisekisa ukuba yonke into ihamba kakuhle. Kuxhomekeke ekubeni uluntu lwasekuhlaleni lunamandla ombane afakelweyo angaphezu kwe-100 kW.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi nge-ICP kunye neempawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » I-ICP